Ọnụahịa, ịdị mma na nchekwa oge ga-ebugharị eCommerce na Spain na 2014 | ECommerce ozi ọma
Ọnụahịa, mma na nchekwa oge ga-ebugharị eCommerce na Spain na 2014
Dị ka Ọmụmụ Kwa Afọ na B2C Electronic Commerce 2012 (Mbipụta 2013) nso nso a nke National Observatory nke telekomunikashions na B ((ONTSI), na eCommerce chere mbata nke 2014 ihu na akụ na ụba na uto kachasị mma na Spain. Dị ka ọmụmụ a si dị, onye na-ere ahịa n'ịntanetị ọ na-adịwanye ọtụtụ, nwekwuo ahụmahụ, na-azụta ọtụtụ ngwaahịa ma na-emeghere ụdị na atụmatụ ọhụrụ.
Dị ka ọmụmụ ahụ e kwuru n'elu si dị, B2C e-azụmahịa na Spain Na 2012 ọ nwetara mmụba nke 13,4% ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga, nke na-anọchite ngụkọta ngụkọta nke nde euro 12.383. N'afọ a, ọnụ ọgụgụ ndị na-azụ ihe n'ịntanetị si na 13,2 nde ruo nde 15,2. N'otu ụzọ ahụ, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ usersntanetị gara n'ihu na-abawanye, na-eru ọnụ ọgụgụ nke 27,2 nde, nke na-anọchite anya 69,9% nke ndị bi na Spain. Tụkwasị na nke ahụ, nkezi ọnụ ọgụgụ onye na-azụ ihe n'perntanet kwụrụ na 816 XNUMX.
Kedu otu onye na-azụ ahịa ntanetị ga-esi nweta profaịlụ na 2014: Igodo
Na-eburu n'uche data ndị a na nke ọhụrụ àgwà ịzụ ahịa nke ndị na-azụ ahịa Spanish, Universitylọ Ọrụ Mahadum Maka Nkà na Technologyzụ na Digital Art Ọfọn eguzobewo 10 igodo iji ghọta ihe profaịlụ n'ịzụ ahịa n'ịntanetị na 2014:
Nye ga-azụta n'ịntanetị? Nkọwa nke onye na-azụ ihe n'ịntanetị ga-abụ afọ ndị tozuru etozu n’etiti afọ 25 ruo 49, nke nwere usoro mmụta nke sekọndrị ma ọ bụ nke mahadum, nke etiti na nke etiti, nke na-arụsi ọrụ ike oge niile yana ndị bi n'obodo ndị nwere ihe karịrị 100.000 ndị bi na ya.
Ebee ka ha ga-azụta? Dabere na akwukwo ONTSI, ulo Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ebe kachasị mma iji zụta ihe na 93,5% nke ikpe, na-emebi ịzụ ahịa site na ọrụ, nke belata site na 3,4 isi ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. A ga-eguzobe usoro a na 2014 na mgbanwe nke omume na usoro nke Spanish.
Site na ngwaọrụ ndị dị a ?aa? Na 2012, nde mmadụ 2,1 jiri igwe eji arụ ọrụ ma ọ bụ mbadamba maka ịzụta gị, nke na-anọchite anya mmụba nke 15,1% karịa afọ gara aga. Inweta data ndị a na akaụntụ, ịntanetị na ekwentị mkpanaaka ga-abụ isi nchọta ihe ọmụma na usoro nyocha ọnụahịa na 2014.
Kedu ugboro ole? Na 2012 ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% nke ndị na-azụ ahịa zụtara ihe n'ịntanetị otu ugboro n'ọnwa. Ọnụ ọgụgụ a na-arịwanye elu kwekọrọ na ịrị elu nke ọnụọgụ nke zụrụ, nke si na 2,98% gaa 3,46% na nke gosipụtara akara ngosi doro anya nke mmụba ugboro ole zụrụ maka 2014.
Kedu uzo ha ga-eji? Ke akpa ini ahụ weebụsaịtị na-ere n'onlinentanet nọ n'ọnọdụ afọ gara aga dịka ọwa ahịa isi na-esote emeputa weebụsaịtị. Tụkwasị na nke a, akwụkwọ ego ego ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ na-akwụ ụgwọ nọgidere na-aga n'ihu, na-eru 26,8% nke ịzụrụ. A ga-akwado usoro a na 2014 maka ụmụ nwanyị, ndị nọ n'okpuru afọ 50, ndị bi na nnukwu obodo na klaasị ka mma dị ka injin nke uto.
Kedu ihe ga-abụ ụdị nkwụnye ụgwọ kachasị eji? La kaadị akwụmụgwọ / debit ga-anọgide na-abụ ụdị kachasị mma nke ịkwụ ụgwọ mgbe ịzụrụ ya, n'agbanyeghị ojiji na ntụkwasị obi ga-aga n'ihu na-abawanye. naanị usoro ịkwụ ụgwọ elektrọnik.
Kedu ngwaahịa ha ga-azụ? Ndị metụtara ya ga-aga n'ihu na-eduzi azụmahịa n'ịntanetị Turismo, tiketi njem na ndoputa ulo. Na mgbakwunye, ọrịre nke tiketi egosi, uwe, ngwa egwuregwu, akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ, yana sỌrụ Internetntanetị na ekwentị. N'otu ụzọ ahụ, egwuregwu nke ohere na asọmpi ga-anọgide na-ada, dị ka o mere n'afọ gara aga.
Kedu ihe ịzụ ahịa gị ga-adị? Na 2012, ọnụ ọgụgụ ndị zụrụ azụ nke weghachiri ngwaahịa belata 26,6%. N’echiche a Karịsịa ịkwalite ahụmịhe ịzụ ahịa: 6 n'ime ndị na-azụ ahịa 10 weere na usoro ahụ dị mfe ma ọ bụ dị mfe, omume ga-agbakọ na 2014.
Kedu ebe netwọkụ mmekọrịta ga-anọ? Ọ bụ ezie na ndị ọrụ fewntanetị ole na ole na-eji netwọkụ mmekọrịta dịka ebe ikpo okwu ịzụ ahịa, 1 n'ime ndị ọrụ Internetntanetị atọ atọworị nke mmekọrịta na ika ahụ site na nke a, omume nke ga-aga n'ihu na-abawanye na 2014.
Gịnị ga-abụ isi brekị ndị na-azụ ahịa? Maka ndị na-azụ ahịa oge niile, nhọrọ nke ụlọ ahịa ga-adabere na nchịkọta nke mbupu ụgwọ, ndị na-esochi ego azụ nkwa. Maka ndị na-abụghị ndị na-azụ ahịa, enweghị ike ịnye data ego na ntụkwasị obi nke ojiji nke enwere ike ịme ozi nkeonwe ga-anọgide bụrụ isi ihe mgbochi.
N'ihe metụtara nke a dị n'elu, Guillermo de Haro, Director nke Master na Digital azụmahịa na U-tad, na-emesi obi ike na "Ahịa, mma na oge echekwara bụ ndị ọkwọ ụgbọ ala B2C e-commerce na Spain, otu n'ime ụzọ ndị ọzọ maka ụlọ ọrụ Spanish na ọnọdụ dị ugbu a."
Ozi ndị ọzọ - Mkpebi nke Report na Azụmahịa Egwuregwu na Spain (mbipụta 2013)ç
Foto - Daniela hartmann
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọnụahịa, mma na nchekwa oge ga-ebugharị eCommerce na Spain na 2014
A mụrụ Wizzo, echiche ọhụrụ nke ọrụ ego dijitalụ
Mpempe V nke MiEmpresa Show maka ndị ọchụnta ego na SME ga-eme na February 2014